‘संक्रमितलाई आइसियूमा भर्ना गर्न रोइकराइ, बेड नै खाली छैन’ :: Setopati
‘संक्रमितलाई आइसियूमा भर्ना गर्न रोइकराइ, बेड नै खाली छैन’
काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको बेला अस्पतालहरूमा संक्रमितको उपचारका लागि आइसियू र भेन्टिलेटर अभाव हुन थालेको छ।
संक्रमितहरूको उपचार गरिरहेका अधिकांश अस्पतालहरूको आइसियू र भेन्टिलेटर बिरामीले भरिएका छन्। सबैजसो अस्पतालहरूले नयाँ बिरामीलाई आइसियूमा राख्ने ठाउँ नभएको बताएका छन्।
महाराजगंजस्थित टिचिङ अस्पतालमा रहेको १६ बेडको आइसियू बेड भरिएको छ। अस्पतालमा अहिले १६ जना संक्रमितहरूको आइसियूमा उपचार भइरहेको छ। जसमा ४ जना भेन्टिलेटरमा छन्।
अस्पतालका कोभिड सदस्य डा. सविन थपलिया भन्छन्, 'अब आइसियू बेड खाली छैन। हिजो एक जनाको मृत्यु भएकाले त्यहीँ एउटा खाली छ।'
अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि भनेर १० वटा आइसियूसहित पाँच वटा भेन्टिलेटर बेड छुट्याएको थियो। संक्रमित संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालले शंकास्पद बिरामीलाई राख्न छुट्याएको ६ वटा आइसियूमा पनि अहिले पोजेटिभ संक्रमितलाई नै राखिरहेको छ।
डा. थपलियाका अनुसार अहिले अस्पतालमा १ सय ६ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ।
उनले अहिले कुनै पनि नयाँ संक्रमितलाई तुरून्त आइसियूमा भर्ना गर्नु परे बेड नै नभएको बताए।
उनले भने, 'आइसियूमा भर्ना गर्नुपर्ने बिरामी आए हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खबर गर्छौं र उहाँहरूले नै कतै आइसियू खाली छ भने मिलाइदिनुहुन्छ।'
अहिले उपत्यकाका सबैजसो अस्पतालमा आइसियूमा भर्ना गर्नुपर्ने संक्रमितलाई बेड अभाव हुँदा भर्ना गर्न सकिएको छैन। हिजोआज आइसियूमा भर्ना गर्नुपर्ने संक्रमितहरूलाई भर्ना गर्न अस्पतालहरूलाई हम्मेहम्मे परेको छ।
यस्तै सुरुदेखि नै कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा रहेको बलम्बुस्थित एपिएफ अस्पतालमा पनि आइसियू बेड भरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका प्रवक्ता डा. प्रवीण नेपालका अनुसार २० बेड आइसियू क्षमता रहेकोमा सबै बेड भरिएको छ।
उनले भने, 'हाम्रोमा आइसियू बेड नै २० वटा हो र अहिले सबै भरिएका छन्। नयाँ बिरामीलाई भर्ना गर्नलाई बेड छैन।'
अहिले अस्पतालमा कुल २ सय ९ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। जसमा २० जना आइसियू र ५ जनाको भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचार भइरहेको छ। डा. नेपालले पछिल्लो समय व्यक्ति लगायत अस्पतालबाट पनि आइसियू बेडका लागि फोन आउने गरेको जनाए।
'अस्पतालहरूले आइसियू खाली छैन भनेर सोध्नुहुन्छ। हिजो पनि वीरबाट एकजनालाई ल्याएर आइसियूमा भर्ना गर्‍यौं। आज भने नयाँलाई लिन सकिएको छैन,' डा. नेपाल भन्छन्, 'अहिले हाम्रै वार्डमा उपचाररत सिरियस संक्रमितहरूलाई पनि आइसियू चाहिने हुन्छ। त्यसैले नयाँलाई भर्ना गर्न गाह्रो छ।'
कोरोना संक्रमितको सुरूदेखि नै उपचार गर्दै आएको टेकु अस्पतालमा पनि आइसियू भरिएको अस्पतालका निर्देशक सागर राजभण्डारीले जानकारी दिए। उनले भर्ना भएकाहरू डिस्चार्ज भएको अवस्थामा मात्र नयाँ संक्रमितलाई आइसियूमा भर्ना गर्न सकिने जनाए। अस्पतालमा २० बेडको आइसियू क्षमता छ।
सरकारी अस्पताल जस्तै संक्रमितहरूको उपचार गरिरहेका निजी अस्पतालहरूमा पनि आइसियू बेड भरिएका छन्।
धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पतालमा कोभिडका लागि छुट्याइएको १२ बेडको आइसियू सबै भरिएको असपतालका निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डेले जानकारी दिए।
'अहिले हामीसँग आइसियू बेड नै छैन। भेन्टिलेटर पनि सबै उपयोग भएको छ। कसैलाई आइसियूमा राख्नुपर्ने भयो भने बेड नै छैन,' उनले भने।
अहिले अस्पतालमा ३५ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको पाण्डेले बताए। उनले अहिले नन कोभिड बिरामीका लागि छुट्याइएको १८ बेडको आइसियू पनि कोभिड बिरामीका लागि प्रयोग गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको बताए।
डा. पाण्डेले भने, 'अहिले के स्थिति आयो भने नन कोभिड आइसियूलाई पनि कोभिड आइसियू बनाएर संख्या बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। अर्को सातासम्म त्यसको टुंगो लाग्छ।'
उनले अहिले उपत्यका बाहिरबाट पटक-पटक फोन आए पनि बिरामीलाई भर्ना गर्न नसकिएको बताए।
'भर्खेरैमात्र चितवन, हेटौंडा र भैरहवाबाट पाँच पटक फोन आइसक्यो। सबैजना रोइकराइ गरिहेका हुन्छन् तर अस्पतालमा भर्ना गर्नलाई बेड छैन। निकै अप्ठेरो अवस्था छ,' उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत काठमाडौं उपत्यकामा अस्पतालहरूमा बेड अभाव हुँदै गएको बताउँदै आएको छ। मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिर अधिकारी भन्छन्, 'संक्रमण बढेको बढ्यै छ। संक्रमण रोक्न नसक्दा हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि गाह्रो हुँदै जान्छ।'
केही दिनयता उपत्यकामा संक्रमितहरूलाई आइसियू बेड गर्न परिवारजनले निकै सास्ती खेप्ने गरेका छन्। अस्पतालका चिकित्सकहरू समेत रातभर आइसियू बेड व्यवस्थापन गर्न सहकार्य गरिरहेका छन्।
संक्रमितकै उपचार गरिरहेका एक चिकित्सकले भने, 'हिजैमात्र ४० जना बढी आइसियू चाहिने संक्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न रातभर डाक्टरहरू लागी पर्नु भयो। अहिले सबैजसो अस्पतालमा बेड छैन। स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान लाग्यो।'
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २२, २०७७, ०६:५५:००